Allgedo.com » 2011 » February » 13
Home » Archive Daily February 13th, 2011 Qaar ka mid ah Odoyaasha Gobolka Gedo oo ka deyriyey xaaladaha Abaaraha ka taagan deegaano badan oo ka tirsan Gobolka (Dhageyso wareysi lala yeeshay laba oday) Feb 13, 2011 Qaar ka mid ah Odayaasha iyo Waxgaradka Gobolka Gedo ayaa waxaa ay walaac xoogan ka muujiyeen abaaro iyo biyo la’aan baahsan oo ka jirta Gobolka Gedo, kuwaasi oo saamayn ku yeeshay nolosha dadka iyo duunyada ku dhaqan deegaano faro badan oo ka tirsan Gobolka Gedo, iyadoo mushkilada ugu weyna ay ka taagan tahay Biyo la’aanta oo gaartey heerkii ugu adkaa iyo cuno la’aan daran... Ra’isal Wasaaraha Soomaaliya oo maanta ka qeyb galay musaanasabad mushaarooyin lagu siinayay ciidankii Naafada Xoogga Dalka Soomaaliyeed (Sawiro) Feb 13, 2011 Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka KMG ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa galabta ka qeyb galay munaasabad ka dhacday Xarunta Ciidanka Naafada xooga Dalka Soomaailyeed ee Isbitaal Martiini taasoo mushaar lagu siinayay Ciidankaasi Naafada ah.
Sidoo kale, munaasabadan waxaa joogay Ra’iisul Wasaare kuxigeenka ahna
Wasiirka Gaashaandhigga Mudane C/xakiin... Ganacsi aad u xoogan oo ka jira degmada Dhoobley ee Jubbada Hoose (Warbixin). Feb 13, 2011 Dhaq dhaqaaq ganacsi oo aad u xoogan ayaa laga dareemayaa degmada Dhoobleey ee Gobolada Jubbada Hoose kadib markii ay magaaladaasi kusoo jabeen Kumanaan shacab ah oo kasoo cararay abaarta diiratay gobolka intiisa kale.
Magaalada Dhoobley oo dhacda xadka ay wadaagaan Kenya iyo Somaliya ayaa hadda ah magaalo kobcaysa waxaana ka jira ganacsi iyo deegaansi horumar dhan walba ah sameeyay.
Maqaayadaha waaweyn... Shirkii mideeynta beesha sade ee uu soo qaban qaabiyay maamul goboleedka SCS oo ka dhacay magaala madaxda dalka Ingiriiska ee London Feb 13, 2011 London, England (AOL) – Waxaa manta oo tariikhdu tahay February 12, 2011 lagu qabtay shir ay isugu yimaadeen dadweeyne aad ufara badan oo isugu jira odayaal dhalinyaro iyo haween kazoo jeeda jaaliyada beesha sade.
Shirkaan oo ay soo qaban qaabisay dawlad gobaleedka Somali Central State (SCS) waxa uu ahaa mid aan isagoo kale hore oga dhicin London marka laga eego cadadka dadka isugu yimid iyo... Qarax Khasaara dhaliyay oo Caawa ka dhacay degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. Feb 13, 2011 Qarax khasaara dhaliyay ayaa caawa ka dhacay xaafadda Buulaxuubey ee magaalada Muqdisho oo kamid ah meelaha ugu amaanka daran deegaanada ay dowladu maamusho.
Goob joogayaal ayaa sheegay in caawa Fiidkii uu qarax weyn ka dhacay goob ay ku sugnaayeen ciidamo katirsan dowladda waxaana halkaasi ka dhashay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidankii la weeraray iyo dad shacab ah.
Qaraxa ayaa ka dhashay Bambaano... Biya la’aan kajirta degmada Xagar iyo guddiga Abaaraha oo qeylo dhaan diray. Feb 13, 2011 a daraBiya la’aan daran ayaa ka jirta degmooyin katirsan gobalada Jubbooyinka oo kamid ah meelaha ay saameynta balaaran ku yeesheen abaaraha ka jira gobalada dalka Somaliya.
Wararka nagasoo gaaraya degmada Xagar ayaa sheegaya in Boqolaal Neef ay harraad iyo gaajo u dhinteen kadib markii ay waayeen baad iyo biyo, goob joogayaal ayaa sheegay in shacabka ku dhaqan degmadaasi ay qarka u saaranyihiin... Khilaaf soo kala dhaxgalay Ahlusuna iyo Weriye Cabdi Kariim Bulxan oo Xabsiga la dhigay. Feb 13, 2011 Weriye Cabdi Kariim Bulxan ayaa weli gacanta ugu jira ciidamo katirsan Ururka Ahlusuna ee maamula degmooyin katirsan Gobalka G/gaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya.
Wararka laga helayo Caabdu Waaq ayaa sheegaya in ciidamada Ahlusuna ay xireen Wakiilkii Shabelle islamarkaana katirsanaa Idaacadda Caabdu-waaq.
Saldhigga Booliska degmada ayuu Weriye Cabdi Kariim ku xinranyahay waxaana loo haystaa... Reer Masar “Mubaarak Fircoonkii Casrigan ayuu ahaa waana ka xorownay”. Feb 13, 2011 Shacabka wadanka Masar ayaa weli wada fantasyo iyo dabaal degyo ay ku muujinayaan farxadda ay u qabaan riditaankii Maxamed Xusni Mubaarak oo ahaa madaxweynihii Masar.
Shalay oo sabti ah waxaa dhacay dabaal degyadii ugu weynaa oo ay reer Masar dhigeen, kumanaan shacab ah oo qurbaha ku sugan ayaa dhigay munaasabado iyo dibad baxyo ay ugu hambalyeynayeen dhalinyarada kacdoonka sameysay.
Wadamada Mareykanka,Ingiriiska,Faransiiska... Radio Allgedo/ Waraysiyo